Profile Company - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
Hordhac kooban oo ku saabsan Shirkadda
Changzhou Longxin Makiinado Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2001 iyadoo 30 milyan oo fund diiwaan gashan. Xarunta ayaa ku yaal aaga horumarinta waqooyiga Hengshanqiao Town ee duleedka bari ee magaalada Changzhou, waa u dhow isgoyska of Beijing-Shanghai tareenka-xawaaraha sare, Shanghai-Nanjing tareenka-xawaaraha sare iyo expressway Shanghai-Chengdu. Longxin waa soo saaraha gaar ah qalab mishiino Chemical la aagga guud ee ku saabsan 13,600 mitir oo laba jibbaaran.
Longxin midaynaysa cilmi farsamo, horumarinta iyo soo saaridda, leh waayo-aragnimo ka badan 20 sano oo ka mid ah wax soo saarka xirfadeed. Our warshad inta badan soo saartaa "Longxin" & "Huabao" mashiinada brand ee buuga dhagax saddex duudduuban, Haydarooliga dhagax saddex duudduuban, computer CNC saddex dhagax oo duudduuban, dhagax kuusha, dhagax wax Nano ciid dhoobada, fiicni Planetary iwm Waxaan sidoo kale la qorsheeyo, dhexgalaan, rakibi iyo qabsato line wax soo saarka la xiriira dhamaystiran oo dhan sida uu codsiga macaamiisha ee la our qalabka. mashiinada Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa in khad, daahan, Jinka elektaroonik ah, sunta cayayaanka, awooda batariga, wax Nano, kiimikada maalin kasta, caag maqaar, qalin, cuntada, dheeha, caag silicone, iyo xanjo guar iwm
Our shirkadda wadaagtan technology dunida sare ee shiidi iyo technology firidhsan aad la leedahay R & D koox xirfadeed iyo had iyo jeer waa hoggaamiyaha cusub iyo kacaankii warshadaha this. Waxaan u hesho in ka badan 20 shay oo shahaadooyin patent, oo ay ku jiraan 5 alaabta ee shatiyada martiqaad. Waxaan ku siin karnaa line shirka xirfadeed sida ay shuruud macaamiisha ee wax soo saarka. Waxyaabaha lagu dhoofiyo United States, Brazil, India, Russia, Japan, Korea, Singapore, Southeast Asia iyo dalalka kale iyo gobolada, oo wuxuu ku raaxaysan sumcad sare ka dhammaan qaybaha nolosha.
Changzhou Longxin Makiinado Co., Ltd leh xaaladda kala duwan sharaf, oo ay ku jiraan ganacsi farsmada heerka sare, technology qaranka budada aalladda ganaax gaar ah xarunta cilmi baarista, wax diyaarinta goobta imtixaanka danbeeyay iyo warshadaha micro-Nano, iyo unit guddoomiye ku-xigeenka Ururka khad Shiinaha. Mashiinada Longxin waa la caddeyn ah TüV, BV, CE iyo ISO09001: 2018.
Our mabda'a waafaqsan yahay "Tayada First, Adeega ugu wanaagsan, Macaamiisha Qanacsanaanta". Saaxiibada Daacadnimo soo dhaweynayaa labada gudaha iyo dibaddaba in ay iskaashi nala iyo wada abuuro mustaqbal ifaya ee warshadaha kiimikada!